विकास बैंकसहित ६ कम्पनीको शेयर सूचिकृत, कुनको कति ? - नेपालबहस
विकास बैंकसहित ६ कम्पनीको शेयर सूचिकृत, कुनको कति ?
| १६:५७:३३ मा प्रकाशित
३ फागुन, काठमाडौं । नेप्सेमा ६ कम्पनीको शेयर सूचिकृत भएको छ । आइतबार नेप्सेमा हिमालयन डिस्टीलरी, मुक्तिनाथ विकास बैंक, लक्ष्मी लघुवित्त, एनएलजि इन्स्योरेन्स, अरुण हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट र कामना सेवा विकास बैंकको शेयर सूचिकृत भएको हो ।
उक्त ६ बटै कम्पनीको १ करोड ५ लाख ९ हजार ५०५ कित्ता बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ ।
नेप्सेका अनुसार हिमालयन डिस्टीलरीको २८ लाख ९२ हजार ३४१.२५ कित्ता बोनस शेयर सूचीकृत भएको छ । यस्तै मुक्तिनाथ विकास बैंकको ४८ लाख ६५ हजार ६१३.१७ कित्ता, लक्ष्मी लघुवित्तको ४ लाख १७ हजार ४५० कित्ता र एनएलजि इन्स्योरेन्स कम्पनीको ७ लाख १७ हजार २५५ कित्ता बोनस सूचीकृत भएको छ ।
त्यस्तै, अरुण हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको ४ लाख ९९ हजार १६२ कित्ता, र कामना सेवा विकास बैंकको ११ लाख १७ हजार ६८३.७९५७ कित्ता बोनश शेयर सूचीकृत भएको नेप्सेले जनाएको छ ।
नेपाली राष्ट्रबादको पक्षमा उभियो परिवार दल १५ मिनेट पहिले
भाेली पाँचौं संस्करणको ‘र्याली अफ होप’ हुँदै, विश्व नेताहरुले सम्बोधन गर्ने २२ मिनेट पहिले
नारायणहिटी दरबारकाे श्रीसदनमा अवलोकनकर्ताको भिड ४ दिन पहिले
इन्द्रावतीमा प्राविधिक शिक्षा पढ्नेलाई छात्रवृत्ति ७ दिन पहिले
राष्ट्रपतिबाट शपथ लिए राजदूतद्वय रेग्मी र विश्वकर्माले २ दिन पहिले
खेलाडीको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि एन्फा र गङ्गालालबीच सम्झौता ३ दिन पहिले
फागुन ७ नेपालीको गौरवपूर्ण र अविस्मरणीय दिनः उपराष्ट्रपति १ हप्ता पहिले
आज बजार फर्केको देख्दा लगानीकर्ता दङ्ग, आजको प्राविधिक विश्लेषणले के देखायो ? ८ महिना पहिले